လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (21) | MoeMaKa Burmese News & Media
ရုပ်ပုံ ဓာတ်ပုံများ ထည့်သွင်းခြင်း
ဂူးဂဲဒေါ့မှာ စာတွေ ဖော်မက်ချတာ ဒီဇိုင်းလုပ်တာအပြင် ရုပ်ပုံ ဓာတ်ပုံတွေကလည်း မိမိအလိုရှိသလို ထည့်သွင်းလို့ ရပါတယ်။ အဲသည်အတွက် မိမိရုပ်ပုံကို ဒေါ့က်ထဲကို ထည့်သွင်းတာကို Upload Image လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂူးဂဲက သူ့ ဂူးဂဲဆိုက်၊ ဂူးဂဲဒရိုက်နဲ့ မိမိ မိုင်ကွန်ပျူတာဖိုင်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်အောင် သြဂနိုက်ဇ်လုပ်နိုင်အောင်ပါ စီမံပေးထားပါတယ်။ အဲသည်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ကြည့်ကြပါစို့။
အခု သင်ခန်းစာမှာ မိမိပုံတွေကို upload, search for, and insert images လုပ်တာတွေ သင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဆိုက်တွေ နေရာချတာတွေကိုပါ လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
To upload an image: (ပုံကို ထည့်သွင်းခြင်း)
Image ထည့်ချင်တဲ့ နေရာမှာ မောက်စ်ကာဆာကို ထားပါ။
Insert မီးနူးကတော့ Image ကို ရွေးပါ။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Insert Image ပြတင်းတခု ပေါ်လာပါတယ်။
အပေါ်မှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ပုံထည်စရာ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိတာကို တွေ့ရပါမယ်။ သင်တန်းဆရာက တခုချင်းစီရဲ့ အကြောင်း ကို ရှင်းပြရပါမယ်။ ပုံတွေ ထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာ အစွန်ဆုံးက Serarch ဆိုတာကို ရွေးရင်တော့ Google က သူ့အင်တာနက်ကနေတဆင့် ပုံတွေကို ရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ်။
Google Search: ပထမ ရှာနည်းကတော့ Google Search ကနေ ရှာတာပါ။ ပုံရဲ့ အမည် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကို ရိုက်သွင်းပြီး ရှာတာပေါ့။ ဥပမာ – fireworks ဆိုပြီး ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်ရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ fireworks နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Life photo archive: Life magazine မှာ ခရစ်သက္ကရာဇ် 1790s ကနေ ယနေ့အထိ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေ ပုံတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ရှာလို့ ရပါတယ်။ Search မှာ Google ကနေ Pull down လုပ်ပြီးတော့ Life ကို ရွေးပါ။ ပြီးတော့ PIE လို့ ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။
Stock photography archive:နောက်တခုကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပုံကွာလတီကောင်းကောင်း အခမဲ့သုံးနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရှာပြီး ထည့်တာပါ။ Stock ဆိုတာကို pull down လုပ်ပြီး ရှာပါ။ ဥပမာ – hotdogs ဆိုတာကို ရွေးကြည့်ပါ။
To search for an image: (ပုံကို ရှာပြီး ထည့်သွင်းနည်း)
မောက်စ်ကို လိုတဲ့နေရာမှာ နေရာချပါ။
Insert မီးနူးကနေ Image ကို ရွေးပါ။
The Insert image box ပေါ်လာရင် Search tab ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
three search options တွေဖြစ်တဲ့ google , life, Stock Images ဆိုပြီး တွေ့ရမယ်။
ရှာချင်တဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်ပါ။ အခု ဥပမာကတော့ hotdogs ပေါ့။
ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ကလစ်လုပ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ်ရွေးတဲ့ပုံဟာ မိမိစာမျက်နှာမှာ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
To delete an image – ပုံကို ဖျက်ချင်ရင် ပုံကို ရွေးပြီးတော့ Delete Key သို့မဟုတ် Backspace ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
After completingasearch, you can switch among the three search options to see additional images. Click the search option drop-down arrow to selectadifferent search option.
Other options for inserting images (ပုံများကို အခြားနည်းများနဲ့ ထည့်သွင်းခြင်း)
Upload ဆိုတာကတော့ သင့်ကွန်ပျုတာထဲက ရှိပြီးသား အသင့်သိမ်းထားတဲ့ ပုံတွေကို upload လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Takeasnapshot ဆိုတာကတော့ သင့်ကွန်ပျုတာမှာ ပါတဲ့ ကင်မရာကနေ သင့်ပုံကို ဓာတ်ပုံ ချက်ခြင်းရိုက်ပြီး စာမူထဲကို ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By URL ဆိုတာကတော့ Google.com မှာ Image Search လုပ်ပြီးဖြစ်စေ၊ သူများ ၀က်ဆိုက်တွေက ပုံတွေကို ရှာဖွေပြီး ဖြစ်စေ၊ ပုံရဲ့ ၀က်ဆိုက်လိပ်စာကို တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပြီးတော့ အဲသည် ပုံကို မိမိစာမူထဲကို ကော်ပီ ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ငှက်တကောင်ပုံကို ULR copy and paste လုပ်ပြီးတော့ ထည့်တာကို ပြထားပါတယ်။
Your albums: ဆိုတာကတော့ ဂူးဂဲအကောင့်မှာ အီးမေးတွေ ဒရိုက်တွေ ဖိုတိုတွေ သိမ်းထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲသည်က မိမိရဲ့ ဂူးဂဲအွန်လိုင်း ဖိုတိုအယ်ဘန်ထဲက ပုံတေကို ရွေးချယ် ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂူးဂဲ ဖိုတိုအယ်ဘန်ရှိတဲ့အကြောင်း သုံးလို့ ရတဲ့အကြောင်းကို သင်တန်းဆရာက ဒီနေရာမှာ အချိန်နည်းနည်း ယူပြီး သင်တန်းသားတွေကို သင်ပေးပါ။ သင်တန်းသားတွေရဲ့ ဖုံးတွေမှာ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်သိမ်းဖူးကြရင် ဂူးဂဲနဲ့ ဖုံးတွေ ချိတ်ထားဖူးကြရင် your album မှာ မိမိတို့ ဓာတ်ပုံတွေ အဆင်သင့် သိမ်းထားတာကို သူတို့ တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။
Google Drive: ဂူးဂဲဒရိုက်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ပုံတွေကို ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားတွေက သူတို့နှစ်သက်ရာ ပုံတွေကို သူတို့ ဒရိုက်တွေမှာ သိမ်းဆည်းထားကြရင် အဲသည်ပုံတွေကို ဒရိုက်ကနေတဆင့် မိမိစာမူထဲကို ထည့်သွင်းလို့ ရတာကို ပြသရပါမယ်။
Editing images (ပုံများကို တည်းဖြတ်ခြင်း)
ပုံတွေကို ထည့်ပြီးနောက်မှာ ဆိုက် အကြီးအသေးပြောင်းတာ၊ နေရာရွေ့တာ၊ ဘယ်ညာအလယ် ညှိတာတွေ လုပ်လို့ရတာကို ဆက်လက်ပြီး လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
To edit the position of an image: (ပုံများကို စာသားများနဲ့အတူ တွဲဖက် နေရာချခြင်း)
ပုံတွေကို စာသားတွေနဲ့ အတူ ထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ သတိပြုမိကြတာ တခုကတော့ ပုံတွေက စာသားတွေ ကြားထဲမှာ ထည့်တာ၊ သို့မဟုတ် စာကြောင်း ပြီးမှ ပုံက သီးသန့် ပေါ်နေတာ ၊ စာသားနဲ့ ပုံက ယှဉ်တွဲပြီးတော့ ပေါ်နေတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲသည်လို ပေါ်နေတဲ့ စနစ်ကို Text Wrapping ကြောင့်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
In line: ဆိုတာက စာသားနဲ့ ပုံ အတူတူ ထားရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံက စာကြောင်းထဲမှာ စာလုံးတလုံးလိုမျိုး နေရာ ယူထားတာကြောင့် စာလုံးတွေ ထပ်ရိုက်ရင် သူကနေ နေရာ လိုက် ပြောင်းနေပါတယ်။
Wrap text: ဆိုလိုတာက စာသားတွေက ပုံကို ဘေးကနေ ကွက်ပြီး ထားရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံက စာပိုဒ်တခုအတွင်းမှာ ၀င်နေရာယူလိုက်ပေမယ့် စာသားတွေက သူ့ဘေးကနေ ကွင်းပြီး စီသွားတဲ့အတွက် သတင်းစာတွေက ကော်လံတွေမှာ ဓာတ်ပုံထည့်ရသလိုမျိုး နေရာကိ ကစားရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Break text: ဆိုလိုတာက စာသားတွေက wrap လုပ်တာ ဖြစ်ပေမယ့် ပုံက line break လိုမျိုး သီးသန့် စာကြောင်းတကြောင်းအဖြစ် နေရာယူလိုက်ပါတယ်။ သည်တော့ စာပိုက်တခုအပြီးမှာ ပုံကို သီးသန့်ထည့်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ နောက် စာတပိုက် ဆက်ရိုက်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဖော်မက် ဖြစ်ပါတယ်။
ထည့်ထားတဲ့ image ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။ three positioning options ကို ပုံအောက်မှာ အခုလိုမျိုး ပေါ်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။
Wrap text. လုပ်တာ၊ In line လုပ်တာ၊ Break Text လုပ်တာကို သင်တန်းဆရာက စမ်းသပ်လုပ်ပြပါ။
To edit the size of an image: (ပုံ၏ ဆိုက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း)
image select လုပ်ပါ။ Resizing handles ဆိုတာက ပုံဘေးဘောင်တွေမှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Corner sizing handles တွေကို မောက်စ်နဲ့ ဖိပြီး ရွှေ့ကြည့်ပါ။ Side sizing handles တွေကိုလည်း စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
You’ve got burgers. We’ve got buns.
Come grill with your neighbors before it gets too hot, dog.
Buzzy Pond Way
Parking on Blair Street
LIVE MUSIC by Bernard and the Black Books
FIREWORKS by Tim & Daisy’s dad
SWIMMING @ BUZZY POND PARK
For more info, contact Ray: raymond.gilsig@gmail.com
အပေါ်က စာဒီဇီုင်းတွေကို မိမိဒေ့ါကူမင့်အသစ်နဲ့ ကော်ပီအင်ပေ့စ် လုပ်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပုံတွေကို လဲပါ။ ဖော်မက် ပြန်ချပါ။